25.08.2020 09.07.2021 admin Marketing
Author: Voodoosida Mikalar
Guddiga Dib-u-habeynta Qabyoqoraalka Dastuurka. Jamhuuriyadda Federaalka. Kheyraadka Dabiiciga ah Qaybsiga kheyraadka dabiiciga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaa ka wada xaajoon doona Dawladda Federaalka Soomaaliya iyo Dawladaha Xubinta ka noqon doona Dawladda Federaalka Soomaaliya iyadoo loo marayo qaab Dastuuri ah. Muddada xilhaynta 1 Muddada xil-haynta Baarlamaanka Federaalku waa afar sano oo ka bilaabata maalinta natiijada doorshada lagu dhawaaqo.
Haddii Baarlamaanka Federaalka uusan oggolaan ama uusan waqti ku darin xaalad degdeg ah, markaa xaaladda degdegga ah ma jireyso. Xeer-hoosaadka Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ah 1 Golaha Shacabku ee Baarlamaanka Federaalka ah waa in uu samaystaa xeer-hoosaadkiisa, kaas oo siinaya ka-qaybgal buuxa xubnihiisa.
Madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxay haynayaan xafiiska ugu badnaan labo xili oo midkiiba uu yahay 5 sano. Suggidda Amniga Jamhuuriyadda Federaalka Ama in arrin looga shakisan yahay musuqmaasuq uu u soo gudbiyo dacwad-oogaha guud. Nidaamka Doorashooyinka iyo Xisbiyada Shuruucda ku saabsan Xisbiyada, Diiwaangelintooda, Doorashooyinka heerka dowladda federaalka ah iyo Guddiga Qaranka ee Madaxbanaan ee Doorashooyinka, waxaa lagu qeexi doonaa shuruuc gaar ah oo uu soo saaro Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Xorriyadda xirfadda, Shaqada iyo Mihnadda Muwaaddin kasta wuxuu xaq u leeyahay in uu si xor ah u doorto xirfadda, shaqada ama mihnadda uu rabo. Qaabka Maxkamadaha Dalka Garsoorka dalku wuxuu noqonayaa sadex Heer oo kala ah: Guddiga Xuduudaha iyo Federaalka: Xeer-hoosaadka Golaha waa inuu qeexo mararka ay lagama maarmaan noqonayso in Golaha Shacabku yeesho fadhiyo ay albaabadu u xiranyihiin. Dawladaha Xubnaha ka ah Federaalka ee Ka jira Soomaaliya sopmaaliya Ilaa inta laga gaarayo goorta dhammaan o Dastuurada dawladaha xubnaha ka ah federaalka la waafajinyo Dastuurka Dawladda federaalk maamulada jira ka hor inta aan la qaadan Dastuurkan ku meel gaarka ahi waxa ay sii haysanayaan awoodaha Dastuurkoodu siinayo.
Cutubka 9aad Laanta Fulinta ee Federaalka. Lahaanshaha sawirka a Image caption Dastuurka Somalia Wasiirka dastuurka ee dawladda federalka Somaliya Cabdiraxman Xoosh Jibriil ayaa sheegay inay meel gabagaba ah marayso hawsha dastuurka inkastoo uu tilmaamay inay weli jiraan talooyin iyo faallooyin ay dastuurka ku yeeshaan madaxda sare ee dawladda iyo saxiixayaasha Road mapka.
Dhaqangelinta Xuquuqda Asaasiga Ah 1 Xuquuqda asaasiga ah iyo xorriyadda lagu aqoonsaday qaybtan waa in la dhowraa marka kasta oo sharci la dejinayo lana fulinayo.
Qaadashada wax ka bedelka Dastuurka inta lagu guda jiro muddo xileedka koowaad ee Aqalka Shacab; ansixinta Dastuur kama dambays ah 1 inta lagu guda jiro muddo xileedka koowaad ee Baarlamaanka Federaalka ee Soomaaliya, baarlamaanka Federaalku waxaa uu qaadan doonaa waxkabeddelka la soo jeediyay ee Dastuurka ku meel gaarka ah kaliya intii lagaga ansixiyay kadib cod kama dambays ah aqalka shacabka codkaasoo u dastuur,a sadex meeloodow laba meeloodiyo cod kama dambaysa ah oo ay u qaadaan Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka ah, codkaasoo ugu yaraan ah sadex meeloodow laba meelood xubnaha jira.
Hindise sharci qabyo ah oo ka bilawday Golaha Shacabka Ka warbixinta cabashada iyo waxyaabaha uu adeegaha gardoonka dadweynaha ka ogaadey arrinta, una gudbiyo madaxda qofka dembiga geystey; 3.
Ka-qaybgalka Dastuuria ee Fadhiyada Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka 1 Wasiirradu waxay ka soo qayb-geli karaan fadhiyada, kana hadli skomaaliya, iyaga oo aan cod ku lahayn.
Xaddidaadda Xuquuqda 1 Xuquuqda lagu sheegay Cutubkan waxaa xaddidi kara sharciga, haddii sharcigaasi uusan si gaar ah u bar-tilmaameedsanayn shakhsiyaad ama kooxo. Guddoomiyaha iyo Garsoorayaasha Maxkamadda Dastuuriga ah; 3. Hindise sharci qabyo ah oo ka bilawday Golaha Daetuurka 1 Golaha Shacabka marka la horkeeno handise sharci qabyo ah waxaa u furan inuu sameeyo mid ka mid ah sida soo socota: Xildhibaannadii golaha shacabka ee 9-kii bishan keenay mooshinka xil ka qaadista madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa maanta ku celiyey in sidiisii u jiro mooshinka, iyaga oo madaxweynaha u soo jeediyey inuu u hoggaansamo sharciga.
Vastuurka, Midiidin iyo Ku-shaqaysi Qasab Ah Habka Hawlqabadka Maxkamadaha Qaranka 1 Maxkamad haddii la horgeeyo dacwad oo ay sharci ahaan dacwadaas quseyso Dawladda Fedraalka oo kaliya, maxkamadaasi waa inay u celisaa dacwadaas maxkamad heer Dawladda Federaal ah. Calanka iyo Astaanta Qaranka 1 Calanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, sida lagu muujiyey qaybta A ee Soomasliya koowaad, waa laydi buluug furan ah oo ay dhexda kaga taal xiddig cad oo shangees ah, madaxyo simanna leh.
Awoodaha Xeer-dejinta Golaha Shacabka Sidoo kale haddii aan laga helin oggolaansho Golaha Xildhibaanka lama qaban karo, xabsina laguma hayn karo iyadoo la fulinaayo xukun maxkamadeed oo xataa kama dambays ah. Shaqaalaha Dawladda ee Rayidka ah 1 Xukuumadda Federaalka iyo Dawladaha xubinta ka ah Dawladda Federaalka waxay shaqaalasanayaan hawl-wadeennadooda.
Qoddodba ay ku heshiiyaan madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamullada ayaa sidoo kale la sheegay in loo badeli doono qoddobo dastuuri ah. Guddiga waa in ahaataa mid loo dhan yahay, waana inay noqotaa dhexdhexaad waana inayna ka badnaan tiro sagaal xubnood ah. Cutubka 16aad — Qodobbada Guud.
Mowduucyada la xiriira Soomaaliya. Sidaas darteed, muwaaddin kasta waxaa waajib ku ah in uu: Haddii la qaato nidaamka madaxweynennimada nambarada qodobbada hoose way is badalayaan. Waajibaadka Caalamiga Ah Inta heshiiska wax waajibinaya ee jirey taariikhda uu Dastuurkan dhaqan gelayo uu waqtigiisu dhacayo ama wax laga beddelayo, waajibka heshiiskaa ka dhashey sidiisa ayuu u jirayaa Qodobka aad.
Guddiyada Wadaagga ee Baarlamaanka Federaalka 1 Labada Gole ee Baarlamaanka Federaalka ahi waxa ay dhisan karaan guddiyo wadaag ah oo hawlahooda soomaalia fududeeya. Madaxweyne ku-xigeenka haddii uu geeriyoodo, iscasilo ama xilka laga qaado A fhayeenka Golaha Shacbiga ayaa la wareegaya xilkiisa.